चिनियाँ राजदूतका कारण ‘प्रचण्ड’लाई टेन्सन ! माफी माग्न लगाए - Nepal Japan
नेपाली समय : 09:48:03
जापानी समय : 01:03:03
चिनियाँ राजदूतका कारण ‘प्रचण्ड’लाई टेन्सन ! माफी माग्न लगाए
16 May, 2019 12:10 | पत्रपत्रिका | comments | 42300 Views
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तनावमा परेका छन्। तत्कालिन एमालेको भातृ संगठन युवा संघको २९ औं स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित समारोहमा उपस्थित दाहाल चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीका कारण तनावमा परेका हुन्।
उनी युवा संघको कार्यक्रममा दिउँसो १ बजेतिर पुगेका थिए। चिनियाँ राजदूत यान्छीले ४ बजे भेटवार्ताका लागि दाहालसँग समय लिएकी थिइन। निर्धारित समयअनुसार उनी भेटवार्ताका लागि दाहाल खुमलटार समेत पुगेकी थिइन। तर, दाहाल युवा संघकै कार्यक्रममा भुलिएपछि उनलाई तनाव भएको हो।
कार्यक्रम लम्बिएर ४ बजे आफ्नो सम्बोधनको पालो आएपछि दाहालले सार्वजनिक रुपमै आफू तनावमा परेका बताएका थिए। समय अभाव भएको भन्दै उनले पूर्ववक्ताको भनाईमा समर्थन जनाउँदै आफ्नो सम्बोधनसमेत छोट्याएका थिए। चिनियाँ राजदूत घरमा पुगिसकेको र निर्धारित समयमा भेट्न नसकेको भन्दै आफ्नो तर्फबाट परिवारका सदस्यलाई माफी माग्न लगाएको कुरा दाहालले कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए।
दाहालले तनावमा पर्नुको कारण यसरी खुलाएः
यस समारोहमा हाम्रा नेता साथीहरुले गम्भीर कुराहरु राख्नुभयो। तपाईहरुले देख्नुभयो होला यहाँ अन्तिम अन्तिमतिर आउँदा म टेन्सनमा छु थोरै। मैले घडी हेरेनछु, तपाईहरुको कुरा सुन्दा, तपाईहरुसँग बस्दै गर्दा। मजाले बसेछु म त। तर, ४ बजे मैले चिनियाँ राजदूतसँग मिटिङ्ग थियो अहिले। ४ यहाँ बजिसक्यो, उहाँ खुमलटार पुगिसक्नुभएछ। अब मलाई टेन्स नहुने त कुरै भएन। मैले खबर त गरे, एकछिन चिया खुवाएर राख्नु, माफ माग्नु भनेर भनेको छु। तर, यहाँ तपाईहरुमाँझ प्रस्तुत गर्ने सबै विषय गोलमाल भयो। त्यसकारण अगाडिकै साथीहरुको धेरै कुरामा समर्थन गरेकै छु मैले। म एक दुइटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु।
अध्यक्ष प्रचण्डको दावी- ‘एमालेका नेताहरुलाई लाइन लगाएर प्रधानमन्त्री बनाउने मै हुँ’